Ndị na-ebunye Ọcha Ọcha na Factlọ Ọrụ - Ndị Na-emepụta Ọcha Ọcha China
Oghere eriri hemodialyzer (nnukwu agbanwe)
Na hemodialysis, dialyzer ahụ na-arụ ọrụ dị ka akụrụ akụrụngwa ma dochie ọrụ ndị dị mkpa nke akụkụ ahụ.
Ọbara na-agabiga dịka eriri dị mma nke 20,000, nke a maara dị ka capillaries, na-agbakọta na ọkpọkọ rọba ihe dịka 30 centimeters ogologo.
A na-eji capiliries eme Polysulfone (PS) ma ọ bụ Polyethersulfone (PES), plastik pụrụ iche nwere nzacha pụrụ iche na njirimara ndakọrịta hemo.
Pores na capillaries na-enyocha toxins metabolic na mmiri dị ukwuu site n'ọbara ma wepụ ha n'ahụ ahụ site na mmiri dialysis.
Mkpụrụ ndụ ọbara na-edozi ahụ dị mkpa dị n'ọbara. A na-eji dialyzers naanị otu ugboro n'ọtụtụ mba mepere emepe.
Clinical ngwa nke disposable oghere eriri hemodialyzer nwere ike kere abụọ usoro: High agbanwe agbanwe na ala oke.
Oghere eriri hemodialyzer (obere mmiri)
A na-eji ihe ndozi dialysate Ultrapure maka nzacha nje na pyrogen
Ejiri ya na njikọ hemodialysis nke Fresenius mepụtara
Principlekpụrụ ọrụ bụ ịkwado akpụkpọ ahụ na-enweghị isi iji hazie dialysate
Hemodialysis ngwaọrụ ma dozie dialysate na-ezute ihe ndị achọrọ.
Kwesịrị ịnọchi Dialysate mgbe izu iri na abụọ ma ọ bụ ọgwụgwọ 100 gachara.
Mmetụta ọbara hemodialysis na-ekpo ekpo maka iji otu
Sterile Hemodialysis nke Sterile maka Nanị Iji Ya na ọbara onye ọrịa na-emekọrịta ihe ma jiri ya mee obere oge nke awa ise. A na-eji ngwaahịa a agwọ ọrịa, yana dialyzer na dialyzer, yana ọrụ dị ka ọwa ọbara na ọgwụgwọ hemodialysis. Ọbara ọbara na-ekesa ọbara onye ọrịa na-esi n’ahụ ya pụọ, usoro ikuku ahụ na-eweghachi ọbara ahụ “agwọ” nye onye ọrịa ahụ.
A na-etinye tubing maka hemodialysis